Rikoooo.com - Seranam-piaramanidina virtoaly, azafady mba ampio!
Fiaramanidina Virtual, azafady ampio!
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by JanneAir15 » 20 feb 2017, 14:31
Salama! Tiako ny momba an'ireny seranam-piaramanidina virtoaly ireny. Efa mahafantatra zavatra momba azy ireo aho, ary eto no mbola tiako ho fantatra. Noho izany dia tiako ho fantatra izay programa anananao ary avy eo raha fantatrao zavatra hafa manan-danja tokony ho fantatro aho. Saingy heveriko fa izany rehetra izany. Oh! ary raha manana soso-kevitra avy amin'ny fiaramanidina virtoaly izay raisiny ianao!
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Dariussssss » 20 feb 2017, 16:23
Voalohany, midera sy mankasitraka ny Forum.
Ho fanombohana, mila simulator sidina ianao. Misy vitsivitsy amin'izy ireo, ary io safidy io dia miankina amin'ny PC anananao, azo antoka kokoa ny Microsoft Flight Simulators 2004 ary FSX,X-Plane ary P3D. Mpandoa vola daholo izy ireo, noho izany dia tsy maintsy mieritreritra an'io ampahany io ihany koa ianao. Misy ny simba sidina freeware iray, saingy tena ratsy izany, tsy dia haiko ny manazava momba azy.
Avy eo, arakaraky ny seranam-piaramanidina dia mila fiaramanidina vitsivitsy ianao. Ny farany, ny mpanjifa ACARS. Izany koa dia miovaova amin'ny VA ka mankany amin'ny iray hafa. Ny sasany dia manana mpanjifa azy manokana. Ireo izay tsy, dia mampiasa mpanjifa efa tranainy sy tsy azo antoka loatra
Ankoatra izany dia mety mila ny sasany ianao add-ons hanatsarana ny lafiny sasany amin'ny sim-piaramanidina, fa tahaka ny nolazaiko fa mety izany.
Skyy azo antoka.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Gh0stRider203 » 20 feb 2017, 17:48
Izaho manokana no hanoro hevitra FSX, na dia amin'izao fotoana izao aza .... mila manana ny alàlan'ny Steam ianao araka izay tratry ny fahalalako izay tsy ampian'i MS intsony ny Dikan-Disk. Tsy ho hitanao aho .... ny vidin'ny Steam Edition dia MAHALALA! Nandoa vola $ 60 aho FSX: Famoahana volamena (Deluxe + Acceleration Add-on), ary dia mandoa vola kely kokoa noho izany ya. IZANY no niheverana fa tsy ny findramam-bola rehetra no hiasa, fa amin'ny fahalalako fa lisitra fohy izany.
Raha ny marina dia tomponandraikitra amin'ny tompon'ny American Airways VA aho ary raha toa ianao ka miangavy ny hividianana fiaramanidina rehetra izay tianao, dia tsy ilainareo ny mividy fiaramanidina ho anisan'ny VA. Raha ny zavatra rehetra tianao / tianao dia maimaim-poana, mahafinaritra ahy izany. Ny fomba ahitako azy ... ny fiainana dia mety ho B * TCH tanteraka indraindray, koa nahoana no mahatonga azy io kokoa? tpt
Lehilahy milamina aho. Miezaka ny tsara indrindra hiarahako miasa amin'ny mpanamory fiaramanidina aho, ary manome valisoa vitsivitsy ho an'ireo izay mavitrika (manomboka amin'ny bonus "moneter" ka hatramin'ny fananana fiaramanidina voatendry ho azy ireo fotsiny). Mifototra amin'ny tranokala en English (toy ny amin'ny county lol) izahay, ary mampiasa ny lozisialy fanarahan-dia ny sidina (izay tena mora ampiasaina btw). Fanampin'izay, afaka manome anao ny fiaramanidina freeware rehetra ampiasainay aho (na dia eto aza ny sasany lol)
Raha manao dia lavitra aho, satria izany no mahatonga ny VA ny ankamaroan'ny $, dia avelako ny mpanamory ahy hanapa-kevitra hoe inona no tiany hatao.